Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 28/12/2019)
Tora Danube rwizi rwendo kana hwauinawo nhoroondo, yomufaro chikafu, uye sakanganwika zvakaitika. Vofamba ano guta Amsterdam mu Western Europe Danube kuti zvishoma nezvishoma anoburukira kupinda Eastern Europe kupfuura varipo nenhoroondo, akadai Salzburg (guta mumhanzi), kana kusvetuka kushanyira kuparadzwa nembariro mu trendy Budapest. muunganidzwa uku European rwizi kufamba kwokunakidzwa ichakukura iwe kure kunyika dreamlike nzvimbo akazara nezviitiko itsva, zvisakamboonekwa, ruzha, smells and gastronomic encounters.
Vakawanda maguta ane chinhu kuti rinovazivisa, rinotsanangura Kuvapo kwavo, uye anoita sezvo kupomba unomhanya kuburikidza maguta mwoyo. The Seine River muParis ndiro River Thames ari kuLondon, Danube kuna muBudapest. Icho kwacho, nharaunda vashanyi pamutemo kuti, apo vanochengeta nomukurumbira zvinokwezva and capture the memories.
Tinofunga unogona chaizvoizvo kusarudza chero mumwe Seine kufamba kwokunakidzwa akabayira uye hauzovipo mwoyo! Uchakwanisa kuona zvakanakisisa Paris, guta rudo. Chisarudzo chako rakafara siyana. Kana iwe dzinotambura nguva, kufamba kwokunakidzwa dziripo kuti nedudziro rako pfupi nguva ikoko. Kuti uwane musana vibe, vane Seine chisvusvuro rwendo, nditarire Eiffel Tower uye Louvre miziyamu, sezvo imi nechikepe kubudikidza. Kana unogona chokubatanidza zvinokwezva izvi uye rwendo ive chete combo, achikwira uriri wechipiri, kuyemura maonero, ndokuzo kutora chikepe rwendo, kunakidzwa chisvusvuro uye Girazi waini. Unogona kutora munhu Moulin Rouge ratidza kana zvakadaro chinoshamisira? Kuona Paris chaiye, mumwe Seine rwendo kunotodiwa.
Nzizi duku, canal kure negungwa makungwa Netherlands anoumba Dutch waterways, uye cruising pano ndiyo chinozorodza nzira kuongorora Europe uye wake achirova nyika pasi. Excursions akapoteredza maguta Amsterdam uye reRotterdam dzichitaridzika pamusoro itineraries, asi womumhuri munhu Dutch waterways rwizi rwendo ndiye akatevedzana 19 zvechokwadi mahwindimiri kuti anomira Canal mabhanga munzvimbo Kinderdijk. Get your cameras ready.
Zvakafanana zvinoshamisa maruva nezvingoro pana Keukenhof, mubindu pakukura ruva. Vakapfeka nemakapeti range vakasikwa ne tulips mamiriyoni manomwe, daffodils nezvimwe Anotumbuka - panguva yavo kwazvo yakanakisisa panguva April uye May. Chenjererai mapfupi kufamba kwokunakidzwa panguva ino gore zvakananga kufunga kuminda girobhu racho Dutch.
All muareka! Bhuku chitima tikiti wenyu River rwendo pamwe Save A Train nhasi uye kuti cruising!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Most Beautiful Rivers In Europe Yekudzidza” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-rivers-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)